Mindiyo Mitsubishi Carbide Carbide Slitting Mindiyaha soo saarayaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha | Xinhua
Mitsubishi mindiyo Carbide Jiingado
Tungsten Carbide Waraaqda Jeexdin Mindi
Waxaa inta badan lagu xiraa qalabka wax lagu gooyo jiingadda, warqadda jiingadana waxaa lagu gooyaa mabda'a kala -goynta.
Waraaqaha carbide -sibidhka ah ee mindiyada wareegsan ee ay sameeyeen tungsten carbide iyo macdanta budada cobalt waxay leeyihiin adkaysi sare iyo xirashada iska -caabbinta, isla mar ahaantaana waxay leeyihiin iska -caabbinta kulaylka oo wanaagsan iyo iska -caabbinta daxalka, si mindiyaha loogu adeegsado jarista baakadaha jiingadda ah.
Iyada oo la hagaajinayo saamiga carbide tungsten iyo cobalt iyo cabirka walxaha budada carbide tungsten, waxaan helnaa carbide sibidh leh oo leh guryo kala duwan si loo daboolo baahiyaha macaamiisha kala duwan.
Shirkaddayadu waxay leedahay in ka badan 20 sano taariikhda soo -saarka ee mindiyo carbide tungsten carbide, oo ku takhasusay soo -saarista waraaqaha jiingadda tungsten carbide mindiyo wareegsan iyo mindiyo kala -gooyo carbide kala duwan.
In ka badan kala bar badeecadaha ayaa loo dhoofiyaa Yurub, Mareykanka iyo waddamada iyo gobollada kale ee horumaray. Wax-soo-saarka badeecaddu wuxuu si buuxda u buuxiyaa shuruudaha adag ee qalabka kala-goynta xawaaraha sare ee kala duwan. Tayada badeecaddu waxay ku jirtaa kaalin hoggaamineed oo ah qaybaha suuqa aaladda warshadaha gudaha iyo dibaddaba.
Hadafka shirkadeenu waa inuu noqdaa kan ugu xirfadda badan, tayada ugu fiican, iyo alaab -qeybiyeha ugu weyn ee mindiyaha kala -goynta birta tungsten.
Agabka lagu taliyay
Darajo Cabbirka Badarka Cufnaanta Adkaansho TRS (N/mm²) Ku habboon Goynta
ZT20U Sub-ganaax 14.35-14.5 91.4-91.8 3200 Loox jiingad ah, Fiber kiimiko ah, Caagag, Maqaar
ZT26U Sub-ganaax 14-14.1 90.4-90.8 3500 Loox jiingado ah, Qaybaha tiiriga Baatariga
ZT30U Sub-ganaax 13.85-14 89.7-90.2 3200 Sabuurad
Sheyada Maya OD (mm) Aqoonsiga (mm) T (mm) Godadka (mm) Loo heli karo Mashiinka
1 230 110 1.1 φ9*6 godad FOSBER
2 230 135 1.1 4 boosaska muhiimka ah FOSBER
3 220 115 1 φ9*3 godad AGNATI
4 240 32 1.2 φ8.5*2 godad BHS
5 240 115 1 φ9*3 godad AGNATI
6 250 150 0.8 PETERS
8 260 112 1.5 φ11*6 godad ORANDA
10 260 168.3 1.2 φ10.5*8 godad MARQUIP
11 270 168.3 1.5 φ10.5*8 godad HSEIH
12 270 140 1.3 φ11*6 godad VATANMAKEINA
13 270 170 1.3 φ10.5*8 godad
14 280 160 1 φ7.5*6 godad MITSUBISHI
15 280 202 1.4 φ8*6 godad MITSUBISHI
16 291 203 1.1 φ8.5*6 godad FOSBER
17 300 112 1.2 φ11*6 godad TCY
Mindiyo goynta jiingadda jiingadaha ah ee Mashiinnada Shiinaha
Sheyada Maya OD (mm) Aqoonsiga (mm) T (mm) Godadka
6 250 105 1.5 φ11mm*6 godad
8 260 112 1.5 φ11mm*6 godad
9 260 114 1.6 φ11mm*8 godad
11 260 158 1.5 φ11mm*8 godad
12 260 112 1.4 φ11mm*6 godad
13 260 158 1.5 φ9.2mm*3 godad
14 260 168.3 1.6 φ10.5mm*8 godad
15 260 170 1.5 φ9mm*8 godad
16 265 112 1.4 φ11mm*6 godad
17 265 170 1.5 φ10.5mm*8 godad
18 270 168 1.5 φ10.5mm*8 godad
19 270 168.3 1.5 φ10.5mm*8 godad
20 270 170 1.6 φ10.5mm*8 godad
21 280 168 1.6 φ12mm*8 godad
22 290 112 1.5 φ12mm*6 godad
23 290 168 1.5/1.6 φ12mm*6 godad
24 300 112 1.5 φ11mm*6 godad
Su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee la xiriira dhibaatooyinka farsamo
Falanqaynta dhibaatooyinka caamka ah ee looxa mindiirta ah ee looxaanta
(Maaha: dhammaan dhibaatooyinka aan ka wada hadalnay mindiyaha aqoonta leh)
S1 Maxaa Sababa Waqtiga Nolosha Shaqada Gaaban ee looxyada wax lagu tolo ee looxa?
J: Cabbirka badarka ee giraangirta shiidi ma habboon tahay?
Cabbirka hadhuudhka oo aad u adag oo giraangiraha shiidi waxay ka dhigaan waqtiyo shaqo oo gaaban oo mindiyo ah
Q2 Waa maxay sababta geesaha looxyada jiingadaha ah loogu jaray mindiyo leh burr iyo ilko?
J: Fadlan hubi cidhifyada mindiyahaaga, ma goynta miyuu ku filan yahay? Ama haddii boodhka jiingadu aad u qoyan yahay?
Q3 Mindiyo ayaa jabay
Giraangirta shiidida lulid aan xasilloonayn ayaa mindiyo jebiya, fadlan hubi sidda giraangiraha shiidi.
Taabasho aan habboonayn ama ku dhufasho waxyaabo kale oo adag.
Q4 Chips oo ku yaal geeska goynta ka dib shiidi.
J: Giraangirta shiidida lulid aan xasilloonayn ayaa sababi karta dhibaatadan, xitaa mindiyo jebin, Shaqo joojinta waxyaabaha adag waxay sababi kartaa jajabyada ku yaal geeska goynta.
Q5 Waa maxay sababta cidhifka looxa jiingaddu ​​uusan toos ahayn?
J: Awoodda aan midabka lahayn ee looxaanta jiingadda ee cufnaanta sare leh.
Su'aalaha la isweydiiyo ee ku saabsan iibinta kahor iyo iibinta kadib
S: Ma heli karaa shaybaarro lacag la'aan ah?
J: Haa, haddii aad leedahay dalab cad, waxaan ku siin karnaa shaybaarro lacag la'aan ah si loo baaro.
J: Waxaan haynaa tilmaamo joogto ah, waxaana la dhoofin karaa saddex maalmood gudahood kadib marka la xaqiijiyo heshiiska.
S: Miyaad sidoo kale siin kartaa gacanta birta?
Haa, waxaan leenahay alaab-qeybiyeyaal iskaashaday sanado badan, waxayna ku siin karaan xargaha wax lagu xoqo oo tayo sare leh, qiimo jaban.
S: Ma dammaanad qaadaysaa tayada?
Haa, waxaan leenahay adeegyo raadraac tayo leh oo loogu talagalay badeecadaha la iibiyay. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah, fadlan xor u noqo inaad la xiriirto shaqaalahayaga iibka. Waxaad ka heli doontaa adeeg-iibinta kadib qancin 24 saac gudahood.
Hore: BHS Jiingadaha Boodhadhka Kala -goynta
Xiga: Mindi loogu tala galay Diaphragm ee Jarida Tiirarka Batariga
Bhs Mindiyo Kala Bixin
Mindiyo Carbide Jiingado Kala -goyn ah
Mindiyaha Kala -goynta Carbide
Mindiyo Kartoon Jiingado ah
Mindiyo Kala Jiidaya
BHS Jiingadaha Boodhadhka Kala -goynta
Agnati Carbide Wareega Jiingad Jiingado ...
Marquip Carbide Wareegga Jiingado Jiingado ...
Mindiyo Kala -goysyada Guddiga Fosber